युवामा भयग्रस्त मनोविज्ञान | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ असार २६, शुक्रबार ११:५८ गते
नेपाली राजनीतिको विडम्बना, सधैँ नेपालमा देशलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि इत्यादि ज्वलन्त विषयहरुमा लडाइँ कहिल्यै भएन । हो, झापा विद्रोहदेखि जनयुद्ध भए र अद्यापि यस्ता युद्धका बादलहरु अद्यापि मडारिइरहेकै छन् । तर, ती वर्गसंघर्षका नाउँमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमै केन्द्रित रहेको कैयौँ दृष्टान्तहरुले पुष्टि गरेका छन् । नेपाली राजनीति सधैँ नै नीतिभन्दा नेताप्रधान रहँदै आयो । अझ त्यसमा पनि सीमित शीर्ष नेताकै तजबिज र आशीर्वादमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने परिपाटी नै हाम्रा निम्ति दुःखद र विडम्बनापूर्ण पनि बन्दै आइरहेछ । अझ सिङ्गो युग नै व्यक्तिका निहित स्वार्थहरुबाट बन्दी बन्नु अक्षम्य लाग्छ ।
तिनै नेतृत्वको स्कुलिङमा प्रशिक्षित र दीक्षित युवा नेतृत्वले समेत जतिसुकै निकृष्ट स्वार्थ सङ्घर्षमा लिप्त भई परस्पर कलह गरिरहे पनि वृद्धपुस्तालाई उचित सम्मान र स्थान दिएर नेतृत्व आपूmले लिन अग्रसर हुने हिम्मत र आँट जुटाउन नसक्नु सिङ्गो देशका निम्ति महँगो साबित भइरहेको देखिन्छ । सीमित स्वार्थको घेरामा रजगज गरिरहेका यी बूढा पुस्ताले त युवाले हस्तक्षेप नगर्दासम्म रजाइँ गर्न पाइरहने हुनाले पनि नेतृत्वका निम्ति कसैलाई अगाडि नसार्नु स्वाभाविकै लाग्छ ।
नेपाली राजनीतिमा अहिले एउटा बहसको उदय भइरहेछ, त्यो हो वर्तमान नेपालको नेतृत्व नेता हुन् कि राजनीतिकर्मी ? धनदौलत आर्जन गर्नेदेखि नातासम्बन्धी र इष्टमित्रहरुलाई जागिर खुवाउने, आप्mना पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई अनैतिक बाटोबाट टेन्डर दिलाउने, आप्mना दलका माफियाहरुका स्वार्थसिद्ध गर्न सदैव लागि पर्ने आदि इत्यादिजस्ता क्षणिक स्वार्थलाई त्यागेर देश र जनतालाई शिरमा राखी सदैव यिनको भलाइका लागि काम गर्ने उच्च आदर्शशील नेतृत्वलाई नेता भनिन्छ । तर, ठीक यसको विपरीत राजनीतिलाई देश र समाजको सेवाभन्दा पनि धनदौलत आर्जन गर्नेदेखि नातासम्बन्धी र इष्टमित्रहरुलाई जागिर खुवाउने, आप्mना पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई अनैतिक बाटोबाट टेन्डर दिलाउने, आप्mना दलका माफियाहरुका स्वार्थसिद्ध गर्न सदैव लागिपर्ने आदि इत्यादिजस्ता क्षणिक स्वार्थमा लिप्त नेतृत्वलाई राजनीतिककर्मी भनिन्छ ।
हो, यी दुई दृष्टिकोणलाई हेर्दा नेपालको नेतृत्वमा नेताभन्दा राजनीतिककर्मीकै अभिलक्षण ज्यादा मिल्ने देखिन्छ । त्यसो त, कतिपय दोस्रो तह र तप्काका युवा नेतृत्वहरुमा समेत नेतामा भन्दा राजनीतिककर्मीकै छायाछवि ज्यादा देख्न सकिन्छ । किन पनि भने क्षमताका आधारमा राजनीतिक भविष्य नदेखेका सक्षम युवापुस्ता पनि आप्mनै स्वाभिमान र स्वतन्त्र अस्तित्वले भरिपूर्ण राजनीतिक जीवन खोज्न र बनाउनमा भन्दा पनि नातावाद र कृपावादमा सीमित बूढा राजनीतिककर्मीकै चाकरी र चाप्लुसी गर्न पुगिरहेको स्थिति छ ।
कांग्रेसभित्रका सक्षम युवापुस्ता कोही देउवा गुटमा, कोही पौडेल र कोही सिटौला खेमामा पछि लागेर हिँडिरहेछन् । त्यस्तै स्थिति छ नेकपाभित्र पनि । सक्षम युवापुस्ता कोही ओलीलाई केन्द्र बनाएर तिनैको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेछन् । कोही माधवकुमार नेपाललाई केन्द्र बनाएर ग्रहझैँ घुमिरहेछन् । कोही प्रचण्डलाई केन्द्र बनाएर तिनैले हालेको दाइँमा पराल माडेर बस्न विवश छन् । कोही वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल आदि इत्यादिलाई केन्द्र बनाएर चक्कर काटिरहेछन् । सबैको एउटै ताक छ कि जस्तो आभास हुन्छ, त्यो हो मन्त्री बन्ने चाहना । यो खेमामा लाग्दा छिटो मन्त्री भइएला कि त्यो खेमामा लाग्दा ? आप्mनो स्वाभिमान, विचार र चेतनाभन्दा क्षणिक स्वार्थवश यसरी झुन्डका पछि लाग्ने बौद्धिक युवापुस्ताबाट जनताले खासै आश गर्ने ठाउँ बँचेको छ जस्तो लाग्दैन पनि ।
उनीहरु बार नाघ्न नसक्ने बूढाहरुले बार लगाइराख्ने र आप्mना वरिपरि घुमाइरहने प्रवृत्तिको निरन्तरता छ अझैसम्म मुलुकमा । नेकपाकै सन्दर्भमा सबै गुटभित्रका सम्पूर्ण युवा राजनीतिककर्मीहरु एकै ठाउँ उभिएर बूढाहरुलाई खोइ चुनौती दिएर अघि बढ्न सकेको ? आपूmहरुले निश्चित समयसीमाभित्र समाधान आउने गरी एउटा बटमलाइन तोक्ने र यो भए ठीक नभए कुनै बूढाको कुरा नसुन्ने नीति र सिद्धान्त र जनादेशअनुरुप अघि बढ्ने महागर्जन किन दिन सकेनन् ? युवाहरु बूढाहरुबाट बेस्सरी हच्किएका छन् । नसबन्दी भएका बहरहरु जस्तै बनेका छन् । कृपादृष्टि नपर्ने हो कि भन्ने भयबाट ग्रसित छन् । फेरि पनि उनै बूढाहरुलाई तपाईंहरु मिल्नुहोस् भनेर मिल्न सम्पूर्ण अग्राधिकार सुम्पनु युवापुस्ताको लाचारीपन मात्र हो भन्दा अतिशयोक्ति हुने देखिन्न ।
एउटा हाँक, चुनौती र खबरदारी खोइ ? कम्तीमा पनि त्यो त गर्न सकिन्छ नि ! हो, घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा उनका निवासमा केही युवा भेला भए र एउटा सन्देश दिन त खोजे, तर त्यो सन्देशलाई कसैले पनि वास्ता गरेजस्तो लागेन । बरू दुर्भाग्य भनौँ या भूपि शेरचनले ‘हामी’ शीर्षकको कवितामा भनेझैँ हामी जनता र युवा पनि पानीका फोकाजस्ता मात्र त रहेछौँ । एकछिन बोल्छौँ र मौन रहन्छौँ । कसैले हप्काइदिए सारा दम सकिहाल्ने । राजनीतिककर्मी पनि त क्यारेमका गोटीजस्ता मात्र त रहेछन् । स्ट्राइकरले जताजता हान्यो उतैउतै चल्ने ! घरी दक्षिणी खेलाडीले प्वाक्क हान्छ त कहिले उत्तरी खेलाडीले । अहिले कसैलाई दक्षिणीले र कसैलाई उत्तरी खेलाडीले हानिरहेछ । पम्पू दिइरहेछ भकुण्डोरुपी मस्तिष्कमा । अर्को कुरा मिल्न र मिलाइदिन अग्रसरता लिइरहेछ उत्तरी खेलाडी, अहिले त्यो पनि अस्वाभाविकरुपमा ।
अझै खुलेर भन्दा उहिले नेपालको सत्ता ढल्ने र बन्ने, दलहरुको ध्रुवीकरण र समीकरण बन्नेजस्ता खेलहरुमा भारतीय र खुफिया एजेन्सीदेखि भारतीय राजदूतको प्रत्यक्ष क्रियाशीलता रहने गरेको लुकाएर लुक्दैन । त्यसबेला चिनियाँ दूतावास मौनता साधेर टुलुटुलु हेरेर बसिरहने गथ्र्यो । अहिले भारतीय एजेन्सीहरु खेलिरहेको भए पनि दूतावास टुलुटुलु हेरिरहेको र चिनियाँ दूतावासनिकै दौडधूपमा सक्रिय रहेको छ जुन भद्दा, कुरुप र दुर्भाग्यपूर्ण पनि लाग्दछ । कूटनीतिक मर्यादा तोडेर राजदूत यान्छीले यसअघि पनि दौडधूप गरेपछि नेताहरु तैँ चुप मैँ चुप भएर थन्किएथे र अहिले पनि उनको दौडधूप नेतालाई मिलाउनकै लागि भएको देखिन्छ ।
यस्ता अर्काले मिलाइदिनुपर्ने असह्य वेदना बोकेर हिँडिरहनु परिरहेछ हामी । तथापि जनता आमाजस्ता पो रहेछौँ, छोराले क्षमा दिनू है आमा भन्नासाथ सबै अपराध र पापाचारलाई पनि माफी दिएर पुनः भोट दिइहाल्ने र जिताएर पुनः सिंहासनमा पु¥याइहाल्ने ! यसर्थ, दोष राजनीतिककर्मीमा मात्र होइन स्वयं आमा बन्ने जनतामा पनि छ । हामी बाबु कहिल्यै बन्न सकेनौँ जसले गल्ती गर्दा दुई झप्पु हान्छ र लगेर कोठामा थुनेर कोर्रा लगाएर ठीक ठाउँमा ल्याउँछ अनि कुशल अभिभावकत्व प्रदान गर्दछ । खोइ त हामी पनि त्यस्तो पिता बन्न सकेको ? कमजोरी सर्वत्र छ । कसैको पक्ष–विपक्षमा बोल्नु, उभिनु र नाराजुलुस गर्नुभन्दा पनि सही के हो ? हुनुपर्ने के हो ? के गर्न सकिए सबैको भलो सम्भव छ भन्ने तथ्यगत निर्देशन जरूरी छ । त्यो न विद्वत् समाजबाट दिन सकियो न जनस्तरबाट नै आउन सक्यो ।
मात्र मिलेर जाऊ भन्ने आशय नराम्रो होइन । तर, सामूहिकरुपमा सुखसुविधा लिने–दिने कुरामा कहीँकतै चरसम्म छाडेको देखिन्न । समाज र देशको बृहत्तर हितका लागि मिलेर जाऊ भन्ने कथनले कदापि मूर्तरुप प्राप्त गर्ने देखिँदैन । अहिले मिले पनि त्यो मिलन क्षणिक पिसाबको न्यानोजस्तो मात्र हुने निश्चित छ । अहिले स्वार्थ मिलिहालेर समझदारी बनिहाले पनि यो कमजोर जगमा रहेकाले फेरि पनि भाँडभैलो नभई छाड्दैन नै । यसर्थ नीति, सिद्धान्त र देशको भ्रष्टाचार, दुराचार, कोरोना, बाढीपहिरो, भूक्षयदेखि अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र आदि इत्यादि जनहितका मुद्दामा भन्दा तपाईंहरु दुई जना मिले हामीलाई आपत्ति छैन भन्ने युवा पङ्क्तिको सोच नै प्रतिगामी छ । नेपाल, खनाल, गौतमहरुको सोच पनि उत्तिकै निकृष्ट छ । एकपक्षीयरुपमा भएका गरिएका नाराजुलुसहरु पनि अतिरञ्जनायुक्तझैँ देखिन्छन् । हामीले नीति, पद्धति, सिद्धान्त र मुद्दाकेन्द्रित लडाइँ र बहस चाहेका हौँ । यसर्थ, युवाले ठोस विषयमा केन्द्रित रहेर पाइला अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।
यद्यपि, एक जना माननीयले युवापुस्ता नेतृत्व लिन असक्षम रहेको उद्घोष नै गरेको सन्दर्भमा अरुले टेको लगाइदिएकै भरमा थामिँदैन र बोकेको कुकुरले मृग मार्न नसकेझैँ अरुले भन्दैमा नेतृत्व लिने आँट आउँदैन भन्नु न्यायोचित नहोला । देश र जनताको सेवा गर्ने सच्चा सपूतकै खडेरी छ । पार्टी र देशको बागडोर हाँक्ने कृष्णझैँ सारथित्व क्षमता कसैमा छैन भन्नु अतिशयोक्तिगत त्रुटि होला । किनभने, जसरी हनुमानभित्र अथाह क्षमता रहेको जाम्वन्तले सम्झाइदिए त्यसरी नै सम्झाउँदै नेतृत्व दिने हो भने हनुमानले झैँ जनता र शहीदका सपना युवाले पु¥याइछाड्नेमा दुईमत छैन । तर, गरूडका अघि नागहरु डराइरहेझैँ शीर्ष नेतृत्वसँग त्रस्त र भयग्रस्त मनोविज्ञान छ, त्यसलाई हरेक दलभित्रका युवाले बागमतीमा बगाएर निर्भीक मनोबलका साथ नेतृत्व लिन अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।